Mepụta Flash XML Gallery na ịgbanwe XML imelite
Mepụta Flash XML Gallery na XML ngosi mmịfe
> Resource> Atụmatụ> Mepụta Flash XML Gallery na XML ngosi mmịfe
Nke a nkuzi ga-egosi gị otú mfe ime flash XML gallery iji photos na ala, ọ dịghị tupu ihe ọmụma chọrọ.
Iji mee ka ọtụtụ n'ime gị photos na ike a pụtara flash XML gallery na XML ngosi mmịfe, ezi XML gallery Ndinam ngwá ọrụ dị ka Wondershare Flash Gallery Factory Deluxe ga-a dị mkpa. Ọ bụ ihe kensinammuo flash foto ngosi mmịfe onye na-enye dịgasị iche iche nke free flash ngosi mmịfe ndebiri na mgbanwe & ngagharị mmetụta maka gị. Ebe ị ga-amata nkọwa banyere otú e si mee XML gallery ma ọ bụ ngosi mmịfe na-agbanwe XML faịlụ imelite XML gallery na ọhụrụ ọdịnaya (oyiyi, caption, desription, oge, wdg).
1 Import Digital Images na Background Music
Ẹkedori XML gallery Ndinam software, họrọ a mode si Gallery mode na ngosi mmịfe Mode nhọrọ. N'ebe a, anyị na-ahọrọ Gallery na ọnọdụ.
Ị ga-amalite site "ịchọgharị" taabụ. Pịa "Tinye Photo" button ma họrọ foto site na kọmputa na storyboard. Ọ bụrụ na ị chọrọ ndabere music, pịa "Tinye Music" button ịhọrọ music faịlụ na kọmputa maka gị XML gallery.
2 Họrọ a XML Gallery Template
Flash Gallery Factory Deluxe-Agụnye ihe karịrị 40 free XML foto gallery ndebiri na Gallery na ọnọdụ. Nanị pịa ọkacha mmasị gị na onye na ị nwere ike ozugbo ịhụchalụ ya aka nri. E nwere nhọrọ n'ihi na ị na hazie gị gallery, gụnyere ndabere na agba na ndabere oyiyi.
3 Preview na Mepụta Flash XML Gallery
Na-aga "Asuanetop" taabụ, pịa "Save" ka mmepụta XML gallery faịlụ ka kọmputa mere na ị nwere ike bulite gị website. A SWF faịlụ, ihe HTML na peeji nke na a "akụ" nchekwa na XML faịlụ ga-eme-akpaghị aka.
I nwekwara ike ozugbo bulite XML gallery gị website site FTP.
Nzọụkwụ 4: Gbanwee XML Files imelite Flash Gallery
Otu n'ime abamuru nke XML bụ na ị nwere ike mfe imelite ngosi mmịfe na ọhụrụ ọdịnaya. Ma na-enweghị n'ịwa ahụ SWF na HTML, nke a nwere ike isi ike ma na-ewe oge. Site mgbanwe XML faịlụ, Flash nwere ike na-agụ ọdịnaya site XML faịlụ na igosi na gị XML gallery ozugbo.
Kwadebe oyiyi na ha thumbnails na ọkacha mmasị gị image edezi usoro. Mgbe ahụ:
1. Iji ịgbanwe oyiyi, caption na nkọwa, oge, wdg, na-emeghe "/resource/xml/album_1/slide.xml" na-agbanwe ederede. N'okpuru ebe a bụ n'ihi na otu onye oyiyi. Ị nwere ike oyiri ya na-agụnye ihe oyiyi na gị XML gallery.
<viewItem ụdị = "n'onyinyo" startTime = "4" oge = "4">
<Ama> <caption> Photo caption </ caption>
<nkọwa> <! [CDATA [<font ihu = "Tahoma" agba = "# FFFFFF "size =" 14 "> Photo Description </ font>]]> </ nkọwa>
<dataInfo size =" 0 "url =" akụ / nchapụta / oyiyi / album_1 / image_0.jpg "thumbUrl =" akụ /res/images/album_1/thumb_0.jpg "/>
2. Iji ịgbanwe XML gallery template, detuo template faịlụ (* .swf ma ọ bụ nchekwa) na "Template" nchekwa n'okpuru echichi ọnọdụ (na-emekarị C: \_ Mmemme faịlụ \_ Wondershare \_ Flash Gallery Factory \_ Template \_) na "/ akụ / nchapụta / ndị ọzọ /, na-emeghe "/resource/config.xml" ịgbanwe ịkpado dị ka n'okpuru.
<maTempXMLData url = "akụ / nchapụta / ndị ọzọ / HemicycleIn.swf" />
<maTempXMLData url = "akụ / nchapụta / ndị ọzọ / template / template.xml" />
A ntakịrị ihe nke siri ike? Ọ bụghị mgbe niile mgbe ị na-mastered ya. XML dị ka a anwansi!
Ngụsị akwụkwọ Songs maka ngosi mmịfe
Olee otú Download / Iji Christmas Songs maka ngosi mmịfe
Best Free Online Photo collage Onye kere
Ngụsị akwụkwọ ngosi mmịfe Ideas - Olee otú na-, Share na ndị ọzọ
Mee Birthday Òkù kaadị maka Baby Mbụ Birthday
Download na Wụnye Microsoft .NET
Olee otú Tinye a ngosi mmịfe ka Joomla Nkeji edemede
Olee otú Mee a Screensaver ngosi mmịfe na Flash Gallery Factory
Family Scrapbook Ideas - Mee a Ahaziri Family Scrapbook
Best ngosi mmịfe Songs Aro